November 30, 2020 - Padaethar
ဒီဇင်ဘာလ ( ၁ )လစာဟောစာတမ်း တင်ပေးလိုက်ပါပြီ….
November 30, 2020 by Padaethar
ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာဟောစာတမ်းကို ဆရာစိုင်း‌‌ကျော်မင်း မှ ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါပြီ မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် ကံကြမ္မာအကောင်း၊အဆိုးများ/ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ဖတ်ရှုကြည့်ပြီး အများဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Like & Share ပေးကြပါ။ ခုနှစ်ရက်သား၊သမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး၊ ကောင်းခြင်းသုခအဖြာဖြာ နှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ…..။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီတစ်လအတွင်း သင်သည် မမျှော်လင့်သောနေရာ၊မမျှော်လင့်ထားသောသူများထံမှ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများရရှိတတ်သည်။ ကိုယ်တကယ်ကြိုးစားထားသော အလုပ်ကိစ္စများကတော့ မအောင်မြင်တာမျိုး၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်ရတာမျိုးကြုံမည်။ ငယ်ရွယ်သူများအဖို့ အထူးဆန်းပွင့်နေသောကာလပင်ဖြစ်သည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းမွှေးပျံကျော်ဇောလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ချီးမွမ်းခံရမည်။ ရန်များတတ်သည်မနာလိုသူများ၊ အပြိုင်အဆိုင် များမည်။ (အထူးသတိထားပါ)။ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စများကြောင့် လွန်စွာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရလိမ့်မည်။ မရောက်ဖူးသောဒေသ၊ ရပ်ဝေးမြေခြားတွေကို ရောက်ရမည့် ကာလလည်းဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်မည်။ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် မကြာခဏစကားများရတာမျိုး၊ နားလည်မှုလွဲရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါသည်။ အာမခံတာမျိုး၊ တာဝန်ယူတာမျိုး … Read more
1.12.2020 to 7.12.2020 ထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ၁ပတ်စာဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း နှင်းမှုန်ဖွေးဖွေး မြောက်လေသွေးသည့် အေးချမ်းသာယာပြီး ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသော ဆောင်းတွင်းကာလ ဒီဇင်ဘာလ၏ နေ့ရက်များ unicode မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ၂၀၂၀ ဒီဇငျဘာ (၁)ရကျမှ ၊ (၇)ရကျအတှငျးဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ ၊ သတိပွုရနျ ၊ ယတွာပွုရနျ (၁)ပတျစာ ဟောစာတမျး အကြှနျုပျ၏ ဣဌသဘောဆောငျသညျ့ ကောငျးသောဟောခကျြမြား မှနျကနျ၍ … Read more
အရူးအမူး ချစ်မိသွားစေဖို့ ဆွဲဆောင်တတ်လွန်းတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်
အရူးအမူး ချစ်မိသွားစေဖို့ ဆွဲဆောင်တတ်လွန်းတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ လျို့ဝှက်ချက် ဘယ်လောက်ပဲ လွယ်လွယ်မချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်နေပါစေ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီအချက်လေးတွေမှာ ကျရှုံးသွားစေပါတယ်နော်။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီအချက်လေးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မချစ်ပဲမနေနိုင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်အားပြင်းလွန်းပါတယ်နော်။ ကဲ ဘယ်လိုအချက်တွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အချစ်မှာ ပြိုလဲသွားစေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဘဝထဲကို ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ယူလာပေးတဲ့သူ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ဘဝထဲကို ပျော်ရွှင်စရာတွေ ယူဆောင်လာပေးတတ်တဲ့ သူမျိုးကို ပိုသတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ သူနဲ့ အတူရှိနေရင် ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရတဲ့ ကောင်လေးမျိုး၊ သူတို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပြုံးရယ်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ယောကျာ်းလေးမျိုးကို ပိုတွယ်ငြိမိတတ်ကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ မိန်းကလေးတွေက ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေကို ပိုရွေးချယ်တတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြင်နာတတ်တဲ့ သူ မိန်းကလေးအများစုက သူတို့အပေါ် ကြင်နာပေးတတ်တဲ့ သူမျိုးကို … Read more
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ (3)မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ….
3 မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ…. သူက မင်းကို တစ်အားလည်းရစ်တယ် ။စိတ်ကောက်ရင်လည်း ခဏ ခဏ ပဲ ။သဝန်တိုတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ။ ဘယ်မှာလဲ ? ဘာလုပ်နေလဲ ?ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ မင်း ကို မေးနေ ၊ ပြောနေတာ ကို မင်း က သံသယ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အကြည့်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ အဲ့လို များ ထင်ရင် အကြီးကြီးလွဲပြီပေါ့ ။တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေက သိပ်ကို ချစ်မိသွားရင် အချစ်ကြီးလာတတ်ကြတယ် ။ အချစ်ကြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ မင်းအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်က ပေါ့ပေါ့တန်တန် မဟုတ်တော့ဘူး။လေးလေး နက်နက်ဖြစ်သွားပြီ ။ မင်းလုပ်သမျှ အသေး အဖွဲ ကိစ္စ … Read more
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာများ တွက်ချက် ဟောကြားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ….. တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ စက်ပစ္စည်းဝင်တာမျိုးတွေ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျှင် သတိပြု ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ဖြတ်လမ်းစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ဥပမာ လောင်းကစားလုပ်ငန်း ။ အိမ်တွင်နာတာရှည် လူများရှိလျှင် သတိပြုပါ။ ခရီးဝေး သွားလာရတာတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပက်သက်တာတွေမှာ သတိပြု ဆင်ခြင်သရာလေးတွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ကူညီမှုတွေ ရတတ်သလို နှောင်ယှက်မှုတွေလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ … Read more
သ၀န်တိုတတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေက သင့်ကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်မယ့်သူမျိုးဆိုတာ ယုံပေးပါ
သ၀န်တိုတတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေက သင့်ကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်မယ့်သူမျိုးဆိုတာ ယုံပေးပါ မိန်းကလေးတွေက အချစ်ကြီးတယ် ၊ အချစ်ကြီးလွန်းရင် ပိုင်ဆိုင်ချင်လာတယ် ၊ သ၀န်တိုလာတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ အချစ်ကြီးပြီး …. သ၀န်တိုတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ သင့်ဆီမှာ သင့်ကို သ၀န်တိုနေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးရှိနေပြီးဆိုရင် သင်က အချစ်စစ်နဲ့ အချစ်ခံနေရလို့ပါ။ (၁) သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲစိတ်ပူတယ် လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ပူတယ်၊ စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းအပေါ် ဖြစ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ လူအပေါ်မှာပဲ စိတ်ပူ ၊ စိုးရိမ်တာပါ။ စိတ်ပူတယ် ဆိုတာကို စိတ်ပူနေတဲ့ လူကပဲ ပျာယာခတ်နေတာမျိုးပါ။ ဒါကလည်း ခံစားဖူးရတဲ့သူမှ သိမှာပါ။ သင်အမှတ်မထင် ပြောဖို့မေ့သွားတဲ့ ကိစ္စရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် သူမအရမ်းကို စိတ်ပူသွားမှာပါ။ သင့်ဆီကို ဖုန်းတွေ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်ထားမယ် ၊ … Read more
သင့်ကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆီမှာ ဒီအမူအကျင့် (၅) ခု ရှိပါတယ်
မိန်းကလေးတိုင်းက ကိုယ့်ဖူးစာရှင်ကို ပုံဖော် စိတ်ကူးထားခဲ့ကြဖူးမှာပါပဲ။ အခုတခါတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူယောကျာ်းလေးဆိုတာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို လေ့လာပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အချိန်မှန် ဖုန်းဆက်တတ်သူ သူ့ရဲ့ အလုပ်ချိန်ကလွဲရင် ကျန်အချိန်တိုင်းမှာ မင်းကိုဖုန်းဆက်တတ်သူပေါ့။ အမြဲ မင်းအသံကို ကြားချင်နေပြီး အဲ့လိုကြားဖို့ ကြိုးစားနေတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းအနားမှာ အတူတူရှိမနေရင်တောင်မှ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို မင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရင်း ကုန်ဆုံးတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အမြဲ sms ပို့တတ်သူ မနက်တိုင်း ဒါမှမဟုတ် ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း sms ပို့တတ်တဲ့ ချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား။ တကယ်တော့ မင်းတို့ကြားက သံယောဇဉ်ကို ပိုပြီးခိုင်မြဲစေဖို့ ဒီလိုအသေးအဖွဲလေးတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ မအားလပ်လို့ ဖုန်းမပြောနိင်ဘူး ဆိုရင်တောင် ချစ်သူကို sms ပို့ပေးဖို့တော့ မမေ့နဲ့နော်။ ၃။ သင့်ကို … Read more